Semalt Review: An Awesome Screen Scraping Service
Web2DB inobatsira uye inobatsira kuvhara screen. Inoshanda sechinhu chekuvakwa kwepa database uye inotibvumira kuti tifambe nezvemashoko emawebhu akasiyana siyana nyore nyore. Izvi web scraper inounganidza ruzivo rusina kusimbiswa kubva kumawebhusayithi uye mapeji eHTML uye inoronga nekugadzirisa zvakanaka. Iwe unotofanira kutaura zvauri kuda kutsvaga uye kuti unoda sei kuisa deta yako, uye Web2DB ichaita basa rayo maererano nemirayiridzo. Iyo data inogona kuchengetwa muMafaira eMesSQL, CSV, Access uye Excel. Web2DB ine hupfumi hwezvinhu zvinoita kuti ive yakanakisisa yekushambadzira webmasters, mabhizinesi, mabhizinesi, mapurogiramu, uye makodhi. Zvimwe zvezvinhu zvakasiyana-siyana zvinokurukurwa pasi apa.
1. SeProject Editor:
Web2DB inoshanda sechine simba uye inoshamisa yemushandisi weprojekiti. Kugadzira web scraping mapurojekiti haisi nyore kusvikira iwe uine unyanzvi hwakakwana hwokugadzira. Asi neWeb2DB, iwe haufaniri kuva mugadziri wepurogiramu kana kuti coder nokuti unogona kuita mabasa ako pasina. Ichi chishandiso chinounganidza, shandura, chindipa kana kubvisa deta yako. Kunyanya, inobatsira mukudziridza marongerwo emhando dzakasiyana-siyana dzinoshanda zvakakwana kunyange kana mapeji epaji akashanduka. Yese mapurogiramu ako ekugadzira uye okuwedzera anogadziriswa nekamwe chete kuchitsvaga.
2. Tora Nhamba Yese Yakagadzikana:
Unogona kugadzirisa Web2DB kuti utore iyo website yose kana mamwe mapeji aro. Zvinonyanya kutora zvese zvakagadziriswa, zvichipa chimiro chakanaka. Iwe unokwanisa kuronga mapeji mashomanana ewebhu kana shanduro yose zvichienderana nezvaunoda, asi hutano hwehupenyu hahuvhiringike zvachose. Ichi chishandiso chakakodzera nzvimbo dzakakura seAmazon, eBay, PayPal, nevamwe. Web2DB ine zvinhu zvakasiyana-siyana zvakasimudzwa uye inotibatsira kuti tive netsika yekurota basa. Icho chinhu chakavimbika uye chakakwana.
3. Tumira Web Fomu:
Kushandisa Web2DB, unogona kutumira mafomu ewebhu kunyanya kutsvaga mafomu uye mafomu ekubhukorora paIndaneti pasina chero dambudziko. Mafomu anogona kuendeswa kune zvose zvinowanikwa mazano, uye zvakabudiswa dhesi inowanikwa mu format CSV. Iwe unogonawo kugadzira keyword-based data uchishandisa purogiramu iyi uye ugoendesa nzvimbo yako kutsvaga injini dzekunyorera indexing nekukwira.
4. Ita neDynamic Websites:
Chimwe chinhu chakasiyana cheWeb2DB ndechekuti inokwanisa kutarisana nemazita maviri ezvinyorwa uye anoshanda. Yakawanda yepakutanga mapurogiramu mapurogiramu haagoni kubudisa zvinyorwa zvinoverengeka kubva kumawebsite ane simba. Kunyangwe vhizha re web scrapers vatora nyaya yekukohwa kubva kumawebsite AJAX, asi Web2DB inoita kuti zvive nyore kwauri kuti ubvise demo kubva kune dzimwe nzvimbo dzine simba. Iwe unofanirwa kukura mupfungwa kuti data yeAJAX 'data ichakutora nguva kuti ibudiswe.
5. Tsigira maitiro akasiyana-siyana:
Web2DB inogona kutengesa data yako yakabudiswa kuExcel, Oracle, OleDB, MySQL, CSV, XML, uye Excel. Iwe unogona kushandisawo zvinyorwa zvinyorwa zvekutsvaga kuti uchengetedze kudhonza kwemashoko kana iwe uine unyanzvi hwekuita purogiramu. Web2DB inogona kutumira mashoko kune Excel 2003 uye Excel 2007 zvakare uye inobatsira iwe kuvhara mifananidzo mu data yako zvakananga. Ichi chishandiso chinopawo spam kuchengetedza, kuchengetedza kuchengeteka kwako uye kuvanzika paIndaneti Source .